Farmaajo oo kusii kordhaya Cadaadiska Gollaha Amniga | KEYDMEDIA ONLINE
Farmaajo oo kusii kordhaya Cadaadiska Gollaha Amniga
Waa markii labaada mudo bil gudaheeda oo Gollaha Amniga kulan ka yeesho Xaaladda cakiran ee ka taagan Soomaaliya.
MUQDISHO, Soomaaliya - Gollaha Amniga ee Qaramada Midoobay ayaa ugu baaqay hogaamiyaasha Soomaaliya inay si dhaqso ah u kulmaan "fursada ugu horeysa" si xal deg deg ah loogu helo jahwareerka dib u dhaca ku keenaya qabsoomida doorashooyinka dalka.
Goluhu ayaa War-saxaafadeed uu saarey kadib warbixin kooban oo uu ka helay ergeyga gaarka ah ee Q.M. James Swan sheegay in doorasho loo dhan yahay oo ka dhacda Soomaaliya ay ku jirta danta shacabka.
Cadaadiska ayaa kusii kordhayay Madaxweynaha mudo-xileedkiisu dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo tan iyo markii ay qabsoomi weyday doorashadii Febuary 8 sababtoo ah heshiis la'aanta ku saabsan hanaanka doorashadda.
Labada dowlad goboleed ee kala ah Puntland iyo Jubbaland ayaa sheegay in aysan ka qeyb galeynin doorashadda iyadoo aan heshiis laga gaarin qodobada la isku hayo oo arinta Gedo ugu horeyso.
Qodobada sidoo kale la isku hayo ee ku saabsan hanaanka doorashada waxaa ka mid ah dhismaha guddiga doorashada oo lagu soo daray xubno katirsan NISA iyo shaqaalaha dowladda, xulista xubnaha guddiga Somaliland.
Mucaaradka ayaa ku eedeeyay Farmaajo oo mar labaad raadinaya inuu dalka sii xukumo, inuu mas'uul ka yahay dib u dhaca doorashadda si mudo korarsi u sameeyo, isagoo diiday in wadahadal la galo saamileyda Siyaadda.
Marnaansho dastuur iyo fowdo ayaa ka dhalatay doorasho la'aanta, waxaana muuqata inuu dalka galayo xukun militeri, maadaama Farmaajo u adeegsanayo Ciidanka qaranka inuu ku caburiyo, kuna weeraro siyaasiyiinta kasoo horjeeda iyo shacabka.